5 Tech Unyanzvi Mangwana maDhijitari Vatengesi Vanoda Ku Tenzi Nhasi | Martech Zone
Mugovera, October 31, 2020 Mugovera, October 31, 2020 Larizza de Vera
Mumakore mashoma apfuura, pange paine shanduko huru munzira yatinoshandisa nayo internet kushambadzira kwedigital. Takatanga kubva kungogadzira webhusaiti kusvika ikozvino kusunga data uye mushandisi chiitiko. Nemakwikwi makukutu munzvimbo yedhijitari, kuve newebsite hakungori kucheka. Vatengesi veDhijitari vanofanirwa kukwidza mutambo wavo kuti vagomira munzvimbo yanhasi inogara ichichinja.
Kushambadzira munyika yedhijitari kwakasiyana zvakanyanya nekushambadzira kwetsika kwatakajaira. Kugadzira ichiri hunyanzvi hwakakosha; zvisinei, hazvipe vimbiso yekubudirira kwako. Kune maturusi akati wandei, hunyanzvi, uye zvinoshandiswa zvaunofanira kuziva kuti uve mushambadzi anobudirira wedhijitari nhasi.
Nezvo izvo mupfungwa, isu takanyora shanu inofanirwa-kuve nehunyanzvi kuti ikubatsire kusvetuka yako basa mukushambadzira kwedhijitari.
Zvitsva zvekutsvaga seGoogle neYahoo zvinobatsira kutyaira akawanda traffic kuwebhusaiti yako uye zvinoita kuti vangangove vatengi vakuwane nyore. Nekuva nenheyo yakasimba yekuti sei SEO inoshanda, unogona kugadzira mushambadziro wekushambadzira uyo unovandudza kuonekwa kwewebsite yako mumajini ekutsvaga.
SEO inogona kukanganisa maitiro emushandisi. Semuenzaniso, vashandisi vane mukana wekubaya mawebhusaiti anowanikwa pane peji rekutanga remhedzisiro yekutsvaga. Iyo yepamusoro iwe uri mune yekutsvaga mhedzisiro, zvirinani kuratidzwa kwako kune vangangove vatengi.
Saka kuti ikubatsire kunzwisisa izvo zvakakosha zveSEO, unogona kuverenga izvi Starter Nhungamiro yakatumirwa neGoogle. Icho chirevo chikuru kune SEO.
Imwe yedzakanakisa nzira dzekutevera uye kuongorora yako musika kufambira mberi kuri kuburikidza nedata analytics. Mazuva ano, unogona kuongorora zvinoitwa nevatengi pamwe nezvavari kuda kana manzwiro avanoita nezve chimwe chigadzirwa. Nekuda kweizvozvo, mishandirapamwe yekushambadzira uye marongero akave nekukanganiswa zvakanyanya nedatha analytics.
Dhata analytics yaita kuti zvikwanisike kuteedzera rwendo rwevatengi, kubva panguva yavanobaya pawebhusaiti kusvika pakupedzisira vatenge chinhu pawebhusaiti imwechete. Nezvo, kuziva mashandisiro ekushandisa data analytics maturusi (semuenzaniso Google Analytics, Adobe Analytics, Hubspot, uye zvichingodaro) chave chinodiwa kune wese mutengesi wedhijitari mazuva ano.
UX uye UI kuvandudza
Nhoroondo yevashandi (UX) uye User Interface (UI) inobatsira zvikuru mukuchengetwa kwevatengi.
Kubudirira kweUX ndicho chiitiko chevashandisi uye mashandiro avanoita newebhusaiti / kunyorera; nepo UI iri iyo yekunzwa kwese kune webhusaiti / kunyorera, inoonekwa chinhu uye chimiro.
Pamwe chete, ivo vanobata nekuchengetedza kutarisisa kwevashandisi kune webhusaiti kana kunyorera. E-commerce makambani seAmazon anonyanya kuisa mari muUI uye UX kusimudzira kusimudzira shanduko yemitero uye kuwedzera kutengesa kwepamhepo. Saka hazvishamise kuti nei paine kuwedzera kuri kudikanwa kwevagadziri veUX neUI.
Yekutanga Coding Mutauro
Zvirongwa ndeimwe yehunyanzvi hwekuwedzera hunyanzvi kune wega mushambadzi wedhijitari. Kunyangwe usina hunyanzvi uhu kana hwakawanda-hwakadzika hunyanzvi hwekukodha, kuziva izvo zvekutanga kunonyanya kukubatsira iwe mukufamba kwenguva.
Kana iwe uchinzwisisa izvo zvekutanga zvehurongwa, iwe unogona kuve nekubudirira kunoshanda pamwe neboka rekuvandudza. Iwe unogona kuzadzikisa zvirinyore zvinangwa zvako zvekushambadzira nekuti unokwanisa kunyatso kutaurirana nazvo. Kunze kwaizvozvo, iwe unozogona kunongedza uye nekupa mazano anobatsira kuchikwata chekusimudzira futi.
Kunyora ndiyo nyowani uye yakakosha kuverenga. Kunyangwe uine zera ripi kana indasitiri iwe urimo, haina kumbobvira yakanyanya kukurumidza kana kunonoka kuti uidzidze. Unyanzvi hwako hwekukodha huchagara huchiuya, kunyanya sezvo mabhizinesi mazhinji achiwedzera online.
David Dodge, Game Dhizaina, Columnist, Mudzidzisi, uye CEO we Codakid
Zvemukati manejimendi system
Content management inonyanya kukosha munyika yedhijitari. Tichifunga izvozvo inopfuura hafu yemawebhusaiti ese anoshandisa CMS, hazvishamise kuti nei chiri chishandiso chakakodzera kune wega mushambadzi wedhijitari.
CMS inobatsira vatengesi kuti vashande zvakanyanya, kubva kugara uchivandudza webhusaiti kuisa zvinyorwa zvitsva. Inojekesa mafambiro ebasa uye inobvumira vatengesi vedigital kuti vabudirire uye vabudirire zvakanyanya munguva shoma. Sezvo zvemukati zvichinyanya kupa kune iyo SEO masosi, mazhinji mabhizinesi anosanganisa CMS kune yavo webhusaiti.
Kusvikira izvozvi, uchiziva akasiyana mapuratifomu eCMS (semuenzaniso WordPress, CMS Hub, squarespace, zvichingodaro) chichava mukana. Kunze kweizvozvo, iwe unogona zvakare kushandisa aya mapuratifomu kugadzira yako kushambadza portfolio pamwe nekuratidza kujairana kwako neCMS kune vangango vashandire.
Tags: digital kushambadzira basabasa rekushambadzirakushambadzira mabasazvirongwaseoUnyanzvi hwehunyanzvihunyanzvi hwehunyanzviuxWordPress
Larizza munyori akazvimiririra anogara muPhilippines. Akanyora zvinyorwa zvakati wandei zveAsia Journal pepanhau, uye achangobva kushanda nekambani yemutemo yeIntellectual Property inotungamirwa muSingapore uye anoronga kuita basa remangwana muIP mutemo.